American Horror Stories Trailer dị ka "Amityville Horror na Crystal Meth"
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ American Horror Stories Trailer dị ka "Amityville Horror na Crystal Meth"
by Trey Hilburn III July 8, 2021 2,930 echiche
Mgbe otu ton nke teasers na ọkwa nkedo anyị mechara nwee ogologo ụgbọala na-adọkpụ Akụkọ American ụjọ. Nnukwu ihe ịtụnanya anyị na-ewepụ bụ na anyị na-enweta Christmas Horror Story na Danny Trejo dị ka Santa Clause.
AHS achụọla ihe ụfọdụ ịkwa ụja maka usoro AHS na-abịanụ. Nyaahụ, anyị kesara akụkọ na ntụgharị ga-amalite site na nguzo naanị ya, ihe elekere 1 nke na-akpọghachi anyị n'ụlọ igbu ọchụ. Ọ bụrụ n’icheta, Ọnwụ Murder bụ ntọala nke American Horror Story n'oge mmalite ya.
Oge ọ bụla nke AHS ejirila isiokwu nkwado dị iche iche mee. Nke mbụ bụ Murder House nke abụọ bụ Asyum, nke atọ bụ Freakshow, wdg…
Akụkọ American ụjọ ga-enwe usoro asaa onye nke ọ bụla na-akọ akụkọ nke ya n'ime oge elekere elekere.
Dị ka anyị kwuru, Danny Trejo dị ka Santa nwere anyị nke ukwuu n'ụgbọ a.
Akụkọ American ụjọ malite na July 15 na FX na Hulu na a pụrụ iche abụọ na nwunye premiere. Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị agaghị anọ ogologo oge ichere AHS Oge 10 na Aug. 25.
You nwere obi ụtọ banyere Akụkọ American ụjọ? Mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa.
Iti mkpu ka eze rụchara mmepụta. Onye nduzi ahụ ekenyela ihe oyiyi dị jụụ iji mee ememe. Lelee ya ebe a.